China Thermocouple ye Cooker Vagadziri uye Vatengesi - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Kubika kweThermocouple > Thermocouple yeKubiki
Thermocouple yeKubiki Vagadziri
Thermocouple yeCooker ndinoda kutenga masampuli ekuyedza, zvakanaka?
Helen: hongu, kwete yemahara sampuro, asi kana rinotevera odha, isu tinodzosera iyo masampuli mari kune yako.
Thermocouple yeKubheka uchaita riini kutumira mushure mekubhadhara kwangu?
Helen: isu tine Thermocouple yeCooker patakagamuchira mubhadharo, ndichatumira ASAP kune yako, (kuburikidza neDHL/ UPS/ TNT/DEDEX, nezvimwewo)
3, Mutengi: Maitiro ekubhadhara Thermocouple yeCooker
Helen: mubatanidzwa weWestern, Paypal, account yemunhu, TT, zvichingodaro.
1. Yakagadzirwa yemhando yepamusoro mhangura, inoshanda ne solenoid vharuvhu kudzivirira tsaona kuti dziitike, kana gasi richidonha uye gasi richipisa zvioneke, Thermocouple yeCooker inogona kudzima.
2. 900mm nezvikamu zvishanu zvegasi zvenzungu Thermocouple yeCooker
3. Yakagadzirirwa kuona tembiricha uye kuyerwa.
4. Yakanyanya nyore uye iri nyore kushandisa.
5. Inokodzera Thermocouple yeKubikira induction yekubika, gasi chitofu, kudziyisa mudziyo uye zvimwe zvinopisa zvishandiso.
Iyi Thermocouple yeKubikira ndeye 150cm pakureba, uye inoita chikamu chakakosha mukuona kushandiswa kwakachengeteka kweanobika - sezvo ichiita sedziviriro pane chako gasi rinopisa. Basa rayo nderokudzivirira gasi rinopisa richisiiwa risina kuvheneka, izvo zvine njodzi zvakanyanya nekuti zvinogona kutungamira kuputika. Iyo thermocouple yakasungirirwa kune gasi rinodzora vharuvhu, uye inogadzirisa kuyerera kwegasi kuchoto chako.
Iyi kureba inogadziriswa Thermocouple yeCooker kit ine 5 akasiyana tambo adapta, akakodzera 5 tambo dzinowanzo zivikanwa pamavharuvhu egasi.
Iyi kit inouyawo nezvigadziri zviviri zvinosanganisirwa - zvekugadzirisa kukwirira kwetipirocouple tip.
Kana yako yazvino Thermocouple yeCooker yapera, isu tine iyi yekutsiva spare inogona kuve iyo yaunoda kuti mubiki wako adzoke mukushanda kwakachengeteka zvakare.
Ndokumbira utarise runyoro rwemhando dzakakodzera kuti uone kuti ichi ndicho chikamu chakakodzera chemudziyo wako.
Thermocouple yeCooker zvinoreva Grain Stabilized Furuya Platinum alloys ane Oxide particles-yekutanga yakasimbiswa Platinum alloy ine fine oxide particles yakagadzirwa neThermocouple yeCooker METAL. Iyo Platinum zvinhu umo diki oxide inowedzerwa uye inogovaniswa homogeneous.
Yedu yakajairika Platinum ine Thermocouple yeKubikira dzimwe nguva yaisagutsa zvizere vatengi nekuda kwekupararira kwesimba uye kuumbwa.
Kufananidza neyakajairika Thermocouple yeKubiki ine yakawanda yakaenzana oxide kugovera uye yakareba yakareba zviyo chimiro padivi, uye mavara aya anopa akasimba zvinokambaira simba uye akawedzera midziyo yehupenyu nguva. Thermocouple yeKubika kupararira yakasimbisa Platinum iyo inopa yakawanda zvigadzirwa kugadzikana uye hwakareba hupenyu hupenyu kune vatengi.Tinonyatsonzwa kunzwa zvikumbiro zvevatengi uye kuvatsigira kuti vagadzire michina nekungwarira kuongorora. Iyo yekushushikana yekufananidza system, yakaumbwa pamusoro pekutsigirwa kweTokyo yunivhesiti, uye yakaunganidzwa matekiniki uye kuziva kuti zvinoita sei isu kuti tigone kurongedza yakagadziriswa dhizaini yezvishandiso mukuteerera kune vatengi chikumbiro. 1. Kunobva gasi: NG / LPG / propane / butane
2. Sevhisi: Gamuchira Thermocouple yeKubikira OEM Sinopts gasi chitofu zvikamu gasi chitofu thermocouple
3. Certification: CSA, CE, ISO9001
4. Mudziyo: hovhoni yegasi, hita yegasi, Thermocouple yeCooker maheater ekunze, volumetric gasi mvura hita
(1) Thermocouple yeCooker
Vanopisa mavara: Iyo tembiricha ye thermocouple pamurazvo ndeye 600-700 mavara anotonhorera: Iyo tembiricha ye thermocouple pamurazvo ndeye 600-700.
(2) Yemukati kuramba: Chibvumirano kune chayo mhando uye kureba uye kushivirira kuri mu + _10% 10% sekurehwa.
(3) Kureba: Zvinoenderana nechikumbiro chevatengi
(4) Huma & chinongedzo: Zvinoenderana nechikumbiro chevatengi
Thermocouple yeCooker inogona kugadzirwa
Thermocouple yeCooker inodzivirira njodzi kubva pakubuda kwegasi zvisina kunanga.
Thermocouple yeCooker semupi wekuenderera kwemagetsi simba remagineti.
Thermocouple yeCooker iri kushanda kubva kune thermo simba kutaurirana kuita eletrical simba.
Thermocouple yeCooker inomira kupa simba remagetsi remagineti kana murazvo wakadzimwa nezvinhu zvekunze.
Yakachengeteka Kitchen Thermocouple
Sekugadzira nyanzvi, tinoda kukupa yakachengeteka kicheni thermocouple. Uye isu tichakupa iwe yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi uye kuendesa panguva.
Gesi Yemvura Heater Thermocouple
Thermocouple chikamu chiri kushanda kubva kune thermo energy converse kupinda magetsi emagetsi. Inonyanya kushanda semupi wekuenderera kwesimba remagetsi remagineti. Inomira kupa simba remagetsi kune magineti kana murazvo waburitswa nevekunze zvinhu, ipapo magineti anoita kuti gasi vharuvhu ivharwe, izvo zvinodzivirira njodzi kubva mukubuda kwegasi. Inotevera inongedzo kune gasi mvura hita thermocouple, ini ndinotarisira kukubatsira kuti uzvinzwisise zviri nani.
Aokai inyanzvi Thermocouple yeKubiki vagadziri uye vatengesi muChina. Zvigadzirwa zvedu ndezve CE Certified. Mukuwedzera, isu tinopawo sampuli yemahara. Unogona kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogara nemutengo wakaderera kubva kufekitari yedu. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu zvemhando, ndapota taura nesu nekukurumidza. Tarisira kushanda newe! Gamuchira shamwari kubva kumativi ese ehupenyu anouya kuzoshanya, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.